Waa maxay sawirka qoto dheer?
sawir Deep waa sheet bir ah geedi socod la xirrira, taas oo maran sheet bir la radially bixiyey dhinta sameynta by tallaabada farsamo ee feer. Geedi socodka waxaa loo arkaa sawir "qoto dheer" marka si qoto dheer ee ka qayb gal ka badan ay dhexroor
Waa maxay noocyada qalabka shaqada ARTMETAL la sameeyo?
Waayo, sawir qoto dheer, doorashooyin wax yihiin kuwo aad u ballaaran oo laga helayo dhammaan Biraha ganacsi baaraandegi ayaa lagu heli karaa warqadda ama foomka gariiradda for sawir qoto dheer. waxyaabaha ugu weyn ee aan u isticmaalno waa ahama 200-400 taxane. qalabka kale ee CRS, HRS, aluminium, naxaas ah, copper waxaa laga heli karaa, sidoo kale.
Maxay yihiin thicknesses wax ARTMETAL shaqo la?
0,1016 mm in 9,525 mm (004 "in .375")
Maxaa dulqaadka ARTMETAL gaari karo?
Iyada oo isku-dar ah dhinto oo machining sare aan ku siin kara dulqaadka ilaa .00254 mm (.0001 ")
Waa maxay ARTMETAL awoodaha hawlaha dugsiga sare?
faaiidaysanayo, qoditaanka, alxanka (TIG, mig, kaalinta), u weheliyo, iyo rakuubbo, insertions iswajahaya, madaama lugtii, shirka, electro-nadiifinayo, nadiifinayo farsamo (qoordiidka, muraayad), daahan budo, engeeg ciid, passivation, dahaadhay
Sidee baan ku heli karaa oraah?
Waxaad RFQ noo soo diri kartaa la sawiro ama shaybaarka ama xataa Istimaalka la qiyaasay tiro, waxaanu kuu soo bandhigi doonaa 2 maalmood oo shaqo gudahood.
Maxaa sawiro ARTMETAL kartaa shaqo la?
JPG, PDF, billabo, DXF, STEP, IGS, ETC.
Waa maxay shuruudaha lacag bixinta ARTMETAL ee?
Sidee baan ku bixin kartaa?
T / T, L / C, D / P, ururka reer galbeedka, iwm Waxaan u isticmaali dhoofinta iyo soo dejinta wakiilka si ay u helaan waraaqaha lacag bixinta iyo maraakiibta waa la soo saaray ee magaca wakiilkiisa. Waxaan la la macaamiisheena dibada ka shaqeeya sanadihii la soo dhaafay (hawlaha asaasiga ah Our waxaa soo saarta iyo been).
Sidee Artmetal kartaa hubiyo tayada?
Artmetal waa ISO9001 certified, qalabaysan mashiinada gobolka-of-the-art iyo leedahay shaqaale xirfad leh, koox khibrad injineernimada in ay is ogow of kasta iyo talaabo kasta oo wax soo saarka. Haddii aan ka daadanayo oo tayo leh, si aanu u saxno ama bedeli alaabta ama soo celin lacagta aad.